DAAWO: Madaxweyne Xasan Sheekh oo si lama filaan ah ugu jawaabay Musharaxiinta ka soo horjeeda…. - Hablaha Media Network
DAAWO: Madaxweyne Xasan Sheekh oo si lama filaan ah ugu jawaabay Musharaxiinta ka soo horjeeda….
HMN:- Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay markii ugu horeysay Siyaasiyiin si kulul uga soo horjeeday Hogaankiisa jawaab cadna siiyey.
Hadal laga soo duubay oo muuqaal ahaa Madaxweyne Xasan ayaa Nasiib wanaag ku sheegay marka ugu horeysa in siyaasiyiin badan ay isku soo taageen qabashada Xukunka Dalka.
RIIX HALKAN SI AAD U DAAWATO MUUQAALKA
Xasan Sheekh oo si maldahan u garaacay hanqal taaga Murashaxiinta sameeynayaan oo la rumeysan yahay in jawaab cad kasoo saari doonaan ayaa dhaliilay hadalo khalafsan ay soo jeediyeen.
Hogaamiyaha Soomaaliya Ee Waqtigiisa dhamaaday Xasan Sheekh waxa uu sheegay in dhinaca kale nasiib daro tahay in murashaxiinta iyo siyaasiyiinta ay dawladnimada la caayo ay u arkeen Xalka Xukunka lagu heli karo.
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayuu ku sheegay in ay Hogaanka Dalka ku heli karin sida ay hadda uwajahayaan oo aflgaaadeyn iyo Dawladnimada oo lagu xad gudbo aan kursiga Dalka lagu qaban doonin.